Inona no jerena ao amin'ny manodidina an'i Cimadevilla ao Gijón | Vaovao momba ny dia
Inona no ho hita eo amin'ny manodidina an'i Cimadevilla
El Ny tanàna manodidina an'i Cimadevilla dia ao amin'ny tanànan'i Gijón ary io no iray amin'ireo tena marina izay azontsika zahana. Raha handeha hankany amin'ity tanàna Asturian ity isika dia tsy maintsy hamakivaky ny manodidina azy malaza indrindra, izay feno toerana mahafinaritra sy rivo-piainana mahafinaritra, indrindra amin'ny vanim-potoana avo. Izany no antony maha-toerana azy io rehefa mitsidika an'i Gijón.
Raha ho hitanao ny tanànan'i Gijón dia mila mandalo ity faritra manan-tantara ity ianao, vavolom-belona amin'ny karazana hetsika rehetra. Io no tranainy indrindra ao an-tanàna ary nahalala ny fomba fanarahana ny vanim-potoana vaovao. Androany dia mahita faritra feno fiainana isika fa manana hatsarana tsy manam-paharoa ihany koa.
1 Ahoana ny fomba hahatongavana any amin'ny faritry Cimadevilla
2 Tantaran'i Cimadevilla
3 Cerro de Santa Catalina sy Fiderana ny Horizon
4 Rindrina sy fandroana romanina
5 Lapan'i Revillagigedo
6 Toerana nahaterahan'i Jovellanos
Ahoana ny fomba hahatongavana any amin'ny faritry Cimadevilla
Ity tanàna manodidina ity dia ao amin'ny tanànan'ny Asturian'i Gijón, izay mora alain'ny fiara. Any amin'ny saikinosy Santa Catalina no misy ny manodidina ary mora dia mora ny mahita azy, satria afaka manaraka ny fidinana avy eny amoron-dranomasina fotsiny isika jereo amin'ny faran'ny faritra Cimadevilla. Betsaka ny toeram-piantsonan'ny fiara eo akaiky eo ary misy ihany koa ao amin'ny faritry Cimadevilla, fa tsara kokoa hatrany ny mamela ny fiaranao any amin'ny faritra vaovao ary mandeha. Ka azontsika atao ihany koa ny mahita ny ampahany amin'ny faritra maoderina amin'ny tanàna sy ny morontsiraka, izay tena tsara tarehy ary manana faritra malalaka an-tongotra.
Cimadevilla no tanàna tranainy indrindra amin'ity tanàna ity ary eo amin'ny havoana misy rindrina no misy azy. Eo amin'ity havoana ity no misy ny trano fiangonana 'Guild of Mareantes de Santa Catalina', ilay tranainy indrindra ao an-tanàna. Tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo dia nakarina ny havoana miaramila hiarovana ny tanàna sy ny morontsiraka amin'ny fanafihan'ny jiolahin-tsambo an-dranomasina. Dia a faritra izay nisy mihitsy aza ny fisian'ny Romana, izay manome antsika ny hevitry ny maha-zava-dehibe stratejika azy noho ny toe-batana miatrika ny ranomasina sy ny havoana iray natokana ho an'ny fisondrotan'ny onja. Tamin'ny taonjato faha-XNUMX, nisy seranana ara-barotra natsangana izay mamarana ity fitokanana ity ary manova ity faritra ity ho fonenan'ny tantsambo sy ny mpanarato, araka ny fantatra ankehitriny, toy ny mpifanolo-bodirano tranainy, izay varotra lehibe tao an-tanàna. Tao anatin'ny am-polony taona faramparany, ity faritra ity dia novelomina indray ary nanjary manan-danja amin'ny tantarany. Nohavaozina ireo tranobe ary nohatsaraina ny fisian'izy ireo satria toerana fizahan-tany tokoa io.
Cerro de Santa Catalina sy Fiderana ny Horizon
Ny havoanan'i Santa Catalina dia faritra zaridaina tsara tarehy ankehitriny, mety tsara amin'ny mandeha an-tongotra ary ahitanao ny olona manao fanatanjahan-tena na mandeha ny biby fiompy. Ity havoana ity dia manome antsika fahitana tsara momba ny tanàna, satria amin'ny faritra avo kokoa, ary koa ny ranomasina sy ny faravodilanitra. Ao amin'io faritra io no misy afaka mahita ny sanganasa malaza an'i Chillida antsoina hoe Elogio del Horizonte izahay. Izy io dia sary sokitra lehibe, misy refy mahatalanjona natsangana tao amin'ilay faritra tamin'ny taona 1990. Sarivongana manavao ny faritra taloha ao an-tanàna izy io ary ankoatry ny fananana toerana lehibe dia mamoaka feo noho ny rivotra, zavatra iray izay mitokona.
Rindrina sy fandroana romanina
Ny sisa tavela amin'ny sisan'ny Romanina ao amin'ny faritry Cimadevilla, fa mbola afaka mahita ny sisa tavela tamin'ny fandroana Romana taloha tao Campo Valdés izahay. ATSINANANA toerana arkeolojika dia hita tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX saingy tsy hiverina aminy izany raha tsy aorian'ny Ady an-trano ary farany tamin'ny XNUMX. Androany isika dia afaka mahita ny ampahan'ny fandroana romana namboarina tamin'ny taonjato voalohany sy ny rindrin'ny tanàna taloha.
Amin'ity faritra taloha ao an-tanàna ity dia misy toerana ihany koa ho an'ny lapa sasany toa an'i Revillagigedo, fantatra ihany koa amin'ny Lapan'ny Marquis an'i San Esteban de Natahoyo. Ity lapa ity dia eo akaikin'ny marina ankehitriny ao an-tanàna. Ohatra tsara amin'ny maritrano Asturian palatial tamin'ny taonjato faha-XNUMX izy io. Izy io dia manana fomba barozy tsara tarehy sy tilikambo roa misy crenellated, miaraka amin'ny ampinga heraldika eo anoloana ny façade. Ny trano fiangonana miharo dia ny Collegiate Church of San Juan Bautista, namboarina tamin'ny fomba Baroque ary vita taona vitsivitsy taorian'ny lapa. Izy roa dia manamboatra toerana mahafinaritra ao amin'ny tanàna taloha.
Toerana nahaterahan'i Jovellanos
Ity iray ity ny trano nahaterahana dia fantatra koa amin'ny hoe Museum Jovellanos. Trano palatial izy io tamin'ny taonjato faha-XV izay an'ny fianakavian'i Jovellanos. Izy io dia misy tilikambo roa eo amin'ny sisiny ary trano fiangonana. Ny kianja manoloana ny trano dia antsoina hoe Plaza de Jovellanos. Ao amin'ny tranombakoka ianao dia afaka mahita efitrano natokana ho an'ny fiainan'i Jovellanos. Etsy ankilany, afaka mahita efitrano vitsivitsy hankafizantsika ny sanganasan'ny artista Asturianina tamin'ny taonjato faha-XNUMX isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Inona no ho hita eo amin'ny manodidina an'i Cimadevilla
Fizahan-tany ambanivohitra any Galicia